Cayaarihii Dhallinta cuslaatay oo lagu qabtay Helsinki(+Sawirro) | Somali Information Center
« Madexweynaha Puntland oo xariga ka jaray Xarunta Sirdoonka Puntland(+Sawirro)
MADAXWEYNE SHARIIF: “Dowladdu guddi ayay u saartay baarista Qaraxa, Ciddii lug ku yeelatana Sharciga ayaa la marsiin doonaa” »
Cayaarihii Dhallinta cuslaatay oo lagu qabtay Helsinki(+Sawirro) April 4, 2012 Helsinki:(SIC)-Swedan oo ku guuleysatay Tar-tankii Cayaartoyda Cuslaatay oo loogu magacdaray Axmed Cali Xasan (Jamhuuriya) Qaarada Yurub oo Ka Dhacay Wadanka Finland.
Magaaalada Helsinki ee caasimada wadanka Finland ayaa waxaa ka dhacay tar-tanka cayaartoyda cuslaatay ee wadamada Yurub. Tar-tankan oo sanadkan loogu magacdaray allah u naxariistee Axmed Cali xasan (jamhuuriya) oo bahda sportiga soomaaliyeed aad u wada yaqaaneen ahaana nin sporti ah, ayaa waxaa ka soo qeyb-galay sagaal kooxood oo ka kala yimid wadamada Sweden, Denmark, Finland (Labo kooxood) iyo shan kooxood oo ka yimid wadanka England oo kala ah Streatham, Wambley, North London, Southall iyo koox ka timid magaalada Manchester.
Tar-tankan ayaa waxaa soo qaban-qaabiyay ururka dhaqanka iyo sportiga ee SOCUS iyo qaar kamid ah bahda sportiga soomaaliyeed ee wadanka Finland. Cayaarahan oo ahaa kuwo aad u xiiso badnaa, ayaa waxaa ka soo qeyb-galay cayaartoydii cuslaatay ee kooxihii heerka koowaad ee Seria A-da iyo kuwa hiwaayadoodu ay tahay cayaarida kubadda cagta oo ka cuslaaday tar-tamada, laakiin weli cayaara kubadda cagta.
Tar-tankan ayaa socday mudo labo maalmood ah oo kala ahaa 30 – 31.03.2012 Sagaalka kooxood ee tar-tanka ka soo qeyb-gashay ayaa maalintii koowaad wada cayaaray cayaaro wareegga koowaad ah. Ka dib, waxaa wareega labaad ee cayaaraha isugu soo baxay afarta kooxood ee kala ah Denmark, Sweden, Southall iyo North London.
Afarta kooxood ayaa u ciyaaray sidan
Sweden Vs North London 3 – 2
Southall Vs Danmark 5 – 4 (Rigoorayaal)
Ugu horeyntii waxaa halkaasi ka Hadley Gudoomiyaha SOCUS mudane Ahmed Imad iyo Gud-xigeenka Isse jeyte, xogayaha ururka Qooje, juujuule, yaasiin kuwaasoo uga mahadceliyay kooxihii iyo shaqsiyaadkii ka soo qayb galey tartankaan,
Waxaa ka dib cayaartii kama danbeysta aheyd ee finalka aheyd isugu soo baxay labada kooxood ee kala ah Sweden iyo kooxda Southall oo ka socotay galbeedka magaalada London. Cayaartan oo aheyd cayaar aad u xiiso badneyd oo dad aad u badan ay ka soo qeyb-galeen ayaa waxay ku dhamaatay 3 – 2 ay ku guuleysteen kooxdii ka socotay wadanka Sweden.
Intii ay cayaarahaas socdeen ayaa waxaa loo gartay in uu noqdo cayaaryahankii ugu wanaagsanaa cayaaryahan cawad oo u ciyaaraayey swedan ahaana cayaartoydii hore ee soomaaliya qaranka iyo kooxdii bada, goolhayihii ugu wanaagsanaa waxaa loo gartay goolhayihii swedan Axmed, gool dhalinta waxaa ku guuleystay cali cadaani oo dhaliyey 6 gool.
Tar-tankii sanadkan 2012 oo ahaa kii lixaad ayaa waxaa ku guuleystay kooxdii ka timid wadanka Sweden oo uu horkacaayey Boos Caato iyo cali cade.
Tar-tankan ayaa waxaa ka soo qeyb-galay cayaartoy badan oo caan ka ahaa wadanka soomaaliya oo ay kamid yihiin Nuur Gaab, Cawad, Sheegoow, Cabdullahi Baynax, Jackson, Sadak Moosow, Jamayka, Waaberi, Aweys Ider, Mustaf Farey, Siidi, Mustaf Adan, Cabdi Fitik, Cabdi Caagane, Bile Axmed Diiriye iyo Cumar Reeto.
Sidoo kale, waxaa cayaarahan goob-joog ka ahaa masuuliyiin ka socotay ururada sportiga, ururka Gos iyo xiriirada Wasaaradda Sportigga Soomaaliyeed.
Iyadoo halkaas ay ka hadleen mas,uuliyiin fara badan kuna dheeraaday sidii loo xoojin lahaa horumarinta sportiga gudaha iyo dibadaba waxay amaan gaara u soo jeediyeen ururka dhaqanka iyo sportiga ee dalka Finland ugana mahad celiyeen soo dhaweyntii wanaagsaneyd ee loo sameeyey.
Tar-tankan ayaa ku dhamaaday si wanaagsan oo nabad ah.
Diyaariye: Axmed Cabdullahi (Imad)